Kedu ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ọgwụ na India? | Njem zuru oke
Industrylọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na India bụ otu n'ime ndị kasị ibu n'ụwa. Ihe Ndị isi ụlọ ọrụ ọgwụ na India n'otu, ha bu ndi n'enye ahia kasịnụ n'uwa. Na mgbakwunye, ha na-enye ihe karịrị 60% nke ụwa chọrọ maka ọgwụ mgbochi.
Ọ bụghị naanị nke ahụ: n’India enwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1.400 ọgwụ ọgwụ nke ndị a kwadoro WHO. Ha na - eweputa udiri ihe di iche iche 60.000 site na 60 di iche iche di iche-iche. N'ihe karịrị ụlọ ọrụ ọgwụ 3.000 na-arụ ọrụ yana netwọkụ siri ike nke ihe karịrị ụlọ ọrụ nyocha ụlọ ọrụ 10.500, enwere ike ịsị na enweghị nsogbu India bu nnukwu ahia ogwu di na mbara ala.
Lọ ọrụ ọgwụ nke India akpọrọ ya na 2019 na US $ 36.000. Ọgwụ jeneral, yana òkè ahịa nke 71%, bụ akụkụ kachasị ukwuu nke nrụpụta ya.
Nke a bụ ndepụta nke ndị isi ụlọ ọrụ ọgwụ na India. Top 10 anyị:
1 Ahụike Cadila
2 Iyi Pharma
4 Redlọ nyocha Dr. Reddys
6 Aurobindo ọgwụ
7 Anyanwu Pharma
8 Ihe ọhụrụ
Ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ ọgwụ na India. E hiwere ya na 1952 site Ramanbhai Patel ma dabere na Ahmedabad. ọ ghọwokwa nnukwu ụlọ ọrụ ọgwụ na India.
Adilọ Ọrụ Ahụike Cadila nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe iri na mba ahụ na ọnọdụ dị iche iche gburugburu obodo: Navi Mumbai, Ankleshwar, Changodar, Goa, Vatva, Baddi, Dabhasa, Vadodara, Dabhasa na Patalganga.
O nwekwara isi ụlọ ọrụ ya na Ahmedabad na ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'akụkụ dị iche iche nke mba ahụ. Pharma Torrent nwere ọkachamara na ịmepụta ọgwụ maka ọgwụgwọ ahụike nke usoro ụjọ ụjọ (CNS), ọrịa eriri afọ, analgesics na ọgwụ nje.
Site na uto dị egwu na iri afọ ndị na-adịbeghị anya, CIPLA, nke e guzobere na Mumbai na 1935, aghọwo otu n'ime ụlọ ọrụ ọgwụ na-aba uru na India.
Firmlọ ọrụ ahụ amalite ọgwụ iji gwọọ ọrịa dị iche iche dịka ịda mba, ọrịa shuga, ma ọ bụ ọrịa iku ume. Ọnụ ọgụgụ ahịa ya zuru ihe dị ka ijeri rupees 7.000 kwa afọ (ihe dị ka nde euro 78). O nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe asaa nke ihe karịrị ndị ọrụ 22.000 na-arụ ọrụ.
Redlọ nyocha Dr. Reddys
Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na India, na atụmatụ mba dị ịrịba ama. The ụlọ ọrụ e hiwere na 1984 site Dr Anji Reddy. Ọ dị n'isi ya na Hyderabad ma na-arụpụta ihe karịrị ọgwụ 180 yana ihe karịrị 50 na-arụ ọrụ ọgwụ.
E nwere asaa Dr. Reddys Labs n'ichepụta osisi na India. Na mpụga mba ahụ, ụlọ ọrụ ahụ nwere ụlọ nyocha na Russia ma kesaa ọgwụ nke ụlọ ọrụ ọgwụ na Belgium nke UCB SA na South Asia.
Ọnụ ọgụgụ ya na-ere ihe karịrị 5.000 rupees kwa afọ. Lupine mụrụ na 1968 n'ihi na ụzọ nke Desh Bandhu Gupta, otu n'ime ndị nchọpụta a ma ama na mba ahụ. Companylọ ọrụ ahụ na-ere ngwaahịa ya ugbu a karịa mba 70 gburugburu ụwa, gụnyere South Africa, Japan, Australia na European Union.
Companlọ ọrụ ọgwụ kachasị elu na India
Tọrọ ntọala na 1988, Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Aurobindo Pharma Limited emekọ ma rụpụta ma mepụta ọgwụ ọgwụ na arụ ọrụ. Ọ ọkachamara na mpaghara ọgwụgwọ isii a kapịrị ọnụ: Central Nervous System, gbasara obi, ọgwụ nje, antiretroviral, antiallergic na ngwaahịa gastroenterological.
Companylọ ọrụ ahụ na-ebupụ ngwaahịa ya karịa mba 120 ma nwee ntụgharị karịrị ijeri Rs 4.000 kwa afọ.
Onye ọzọ nke isi ụlọ ọrụ ọgwụ na Idnia, tọrọ ntọala site na Dilip shanghvi n’afọ 1983 na mpaghara Vapi nke Gujarat. Na mbido Sun Pharma raara onwe ya nye imepụta ụdị ọgwụ ise dị iche iche maka ọgwụgwọ nke ọrịa psychiatric. Mgbe e mesịrị, ụlọ ọrụ ahụ nwetara ọgwụ Ranbaxy, na-abawanye isi obodo ya ma gbasaa mmepụta ya.
70% nke Sun Pharmaceutical's drugs na-ere na United States. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya ụlọ ọrụ ahụ amalitela mgbasawanye siri ike nke dugara ya imeghe osisi na mba ndị dịka Mexico, Israel ma ọ bụ Brazil.
Innovexia Life Sciences Pvt. Ltd. bụ onye a ghọtara dị ka a na-eduga ụlọ ọrụ n'ụwa niile n'ichepụta na ire ahịa ọgwụ dị iche iche. Ugwu nke ụlọ ọrụ ọgwụ a dị na ọkwa dị elu nke ndị otu ọkachamara, ụlọ ọrụ ya ọgbara ọhụrụ na itinye ego ya na ọrụ nyocha ọhụụ.
Dabere na Bombay, Kemlọ nyocha Alkem bụ otu n'ime ndị isi na-emepụta ọgwụ ụlọ ọrụ na India. A na-ere ngwaahịa ya n'ihe karịrị mba iri anọ- Ọgwụ dị elu dị egwu, ọgwụ ndị na-arụ ọrụ ọgwụ na nutraceuticals. Na ngụkọta, ihe karịrị ụdị 800 na-ekpuchi ngalaba ọgwụgwọ niile.
Ahịa Alkem na-ere ngwaahịa na United States n'okpuru ụghalaahia Gbagoo. N'otu aka ahụ, ọ na - amalite ọrụ ya na ahịa ndị ọzọ dịka Australia, Chile, Philippines na Kazakhstan, na ndị ọzọ.
Ndepụta anyị mechara IPCA Laboratories Ltd., ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị afọ iri isii nke ahụmahụ. A na-ekesa ngwa ahịa ya n'ihe dị ka mba 120, ebe ndị ọrụ ya dị iche iche na-eto otuto n'ụwa niile.
Otu ebumnuche bụ isi nke IPCA bụ ijigide ogo dị elu na ngwaahịa ya niile, ịkụ nzọ na iche na ụfọdụ ọgwụgwọ ọgwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Kedu ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ọgwụ na India?
Ọ ga-amasị m ịmara aha Laboratories na India, nke ndị DIGEMID nke Peru kwadoro
Zaghachi Raju Mahtani
Ọ ga-amasị m ịmara ndepụta nke ụlọ nyocha iji mara ihe ha nwere ma nwee ike iso ha rụọ ọrụ, anyị nwere Houselọ Nnọchiteanya maka Venezuela, Colombia na Central America
Zaghachi ELIAS TAHAN